waa maxay hadallada tijaabada ah iyo tijaabinta heuristics?
Ugu Weyn Ee Qa Maxay yihiin Erayada Tijaabada iyo Daaweynta Imtixaanka?
Maxay yihiin Erayada Tijaabada iyo Daaweynta Imtixaanka?
Adduunyada tijaabinta iyo hubinta tayada, inta badan waxaan maqalnaa ereyada Tijaabinta Oracles iyo Heuristics Imtixaanka, laakiin maxay yihiin iyo sida aan ugu hirgalin karno howlaheena imtixaanka maalinlaha ah?
Aynu aragno sharaxaad aad u wanaagsan oo ku saabsan hadallada tijaabada ah iyo tijaabinta heuristics Katrina Clokie
Ka soo qaad in aan doonayo inaan cuno qajaar la dhanayo. Qaamuuskeygu wuxuu ku keydsan yahay weel dhalo weyn ah. Gurigayga, qofkii ugu dambeeyay ee cuna qajaar la cuno wuxuu ahaa ninkayga. Weelkii ayuu si adag u xidhay. Isku daygaygii ugu horreeyay, waan ku guuldaraystay inaan furo.
Maxaan sameeyaa marka xigta?
Waxaan hubiyaa inaan u leexanayo dhanka bidix si aan daboolka uga furfuro oo aan mar labaad isku dayo. Ka dib waxaan dib u soo ceshadaa tuwaal shaah ah si aan u qabsado qabsasho ka fiican markaan qalloocinayo daboolka dhalada. Ugu dambeyntiina, aniga oo xoogaa niyad jabsan, waxaan aadayaa oo aan helaa ninkayga. Wuxuu si guul ah u furay weelkii.
Markii aad la kulanto weel aan furi doonin waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan ogahay inay mudan yihiin in la isku dayo. Kuwani waa weelkeyga furitaanka heuristics. Markii lay faray inaan tijaabiyo arjiga sofweerka waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan ogahay inay mudan yihiin in la tijaabiyo. Kuwani waa tijaabooyinkeyga tijaabinta.
Heuristics waa farsamooyin ku saleysan khibrad ku saleysan xalinta dhibaatada, barashada, iyo daahfurka. Halka raadinta dhammaystiran ay tahay mid aan macquul ahayn, hababka daweynta ayaa loo adeegsadaa si loo dedejiyo geeddi-socodka helitaanka xal lagu qanco. Tusaalooyinka habkan waxaa ka mid ah adeegsiga qaanuun suul ah, mala awaal aqoon leh, xukun dareen leh, ama caqli caadi ah.
Ka soo qaad inaad tijaabineyso degel internet e-commerce ah. Inta badan bogagga shabakadaha elektaroonigga ah 'natiijooyinka raadinta waxay ka kooban yihiin miirayaal iyo kala-soocid hawleed. Sanado badan oo aan khibrad ulahaa tijaabinta websaydhada elektaroonigga ah, waxaan u imid inaan barto in isku-darka miirayaasha iyo kala-soocidda ikhtiyaariga ah ay u badan tahay inay muujiyaan cilladaha xiisaha leh, maaddaama tani ay dhacday marar badan, sidaa darteed, mashruucayga xiga, waxaan si macquul ah u tijaabin doonaa xaaladaha qaarkood la xidhiidha isku-darka miirayaasha iyo kala-doorashooyinka.
Ka soo qaad in aan saaxiibkay la qadeeyo. Waxaan galaa makhaayad markay tahay 12 pm Khamiista. Saacad ka dib markii aan ku raaxeysanayay cuntada, waxaan makhaayada ka soo baxayaa 1-da duhurnimo ee Jimcaha. In kasta oo aan soo maray kaliya hal saac, adduunkii igu wareegsanaa maalinba wuu u wareegay.
Sideen ku ogaan karaa inay dhibaato jirto halkan?
Waxaa laga yaabaa inaan dhowr taleefan ogeysiiyo taleefankayga gacanta asxaabta iyo qoyska oo is weydiiya halka aan joogo. Waxaa laga yaabaa inaan haysto tigidh baarkinka. Waxaan arki karaa qof aqriya wargeys jimcaha.
Waxaa jira dhowr qaab oo aan ku ogaan karo inaan ka booday maalin noloshayda. Kuwani waa waqtigayga socdaalka ah. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aan ku ogaan karo inaan ku helay cillad ku jirta barnaamijka softiweer. Kuwanu waa hadallada aan tijaabada u yahay.
Oracles waa mabda 'ama farsamo aan ku aqoonsanno dhibaato. Oracles Imtixaanku asal ahaan waa natiijooyinkaaga aad filayso.
Ka soo qaad inaad tijaabineyso howlaha galitaanka degel. Marka hore, waxaad ku hubin kartaa username ansax ah iyo erey sir ah oo sax ah iyo filo si aan u arko mid u rogista bogga koontadayda ama u wareejinta bogga ka hor gelitaanka. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad isku daydo inaad gasho oo aad aragto qalad 500 jawaab ah, adiga ogow in wax khaldameen.
Oracles iyo Heuristics ee Agile iyo baaritaanka sahaminta
Labada Oraail ee Tijaabada iyo Heeristics Tijaabada labadaba waa muhiim marka ay timaado baaritaanka sahaminta ee jawiga kacsan. Marka aynaan haysan waqti ku filan oo aan ku dhisno kiisaska tijaabada oo sheygu si isdaba joog ah isu beddelayo, kuma tiirsanaan karno uun qoraallada imtixaanka horay loo sii qorsheeyay, waa inaan isticmaalnaa aqoonteenna domain (Oracles Test) iyo khibraddii hore ee imtixaanka (Heuristics Test) ) inaad awood u yeelatid inaad si dhakhso leh u naqshadeyso una fuliso tijaabooyin isku mar adigoo waliba wax ka baranaya sheyga.
sii dhex mar maab java
sida loo qarin karo Python
Liiska loogu beddelo diyaarinta Java
Sida Looga Gudbo Caqabadaha Imtixaanka Baahan
Bayaannada Xaaladda Python - Haddii, Kale iyo Elif
Sidee loo Sameeyaa Qaab-dhismeedka Is-beddelka Imtixaanka laga bilaabo xoqida?
Maxay tahay sababta Selenium iyo Qajaar loo wada isticmaali la’yahay
Guudmarka Aqoonsiga iyo Maareynta Gaaritaanka (IAM) iyo Bixiyaha Aqoonsiga (IdP)
Qalabaynta Tijaabinta Intaad Socoto
Java Hel Waqtiga Taariikhda Hadda